Nezvedu - Huizhou Kaiwansi Electronic Technology CO., LTD.
Huizhou kaiwansi Magetsi Technology CO., LTDiri muHuizhou City, Guangdong Province. Yakatemerwa inyanzvi yepamusoro-yekupedzisira isina waya nhare inogadzira, ichitarisa imwe mahedhifoni R&D, kugadzirwa uye kushambadzira kweanopfuura makore mapfumbamwe.
Zvigadzirwa zvikuru zvinosanganisira bhanhire, musoro uye Tws nhare. Fekitori yedu ine nzvimbo inopfuura 3,000 mativi emamirita nevashandi vanopfuura mazana maviri uye mana ekukura mitsara yekugadzira. Parizvino, chinzvimbo chekugadzira chiri pamusoro pezviuru mazana maviri emazana pamwedzi uye zvigadzirwa zvakaendeswa kunze kwenyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu. Uye zvakare, zvigadzirwa zvedu zvakakunda kuonga kukuru mumisika dzakasiyana pasi rese. Uye isu tinotsigira tsika logo pane chigadzirwa.
We wega akashongedzerwa nezvigadzirwa zvemberi zvekuyedza, zvigadzirwa zvekugadzira uye manejimendi sisitimu yekuona zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Zvese zvinhu zvedu zvinonyatsotevedzera kune iyo ISO9001: 2015 Hunhu Kudzora Masystem.
Kubva zvagadzwa muna 2010, KAIWANSI inogara ichizvipira pazvigadzirwa dhizaini, kutonga kwehunhu uye sevhisi sevhisi, iko kupindura nekukurumidza uye kunosvika kugutsikana kwevatengi. Kuburikidza nekuenderera nesimba, KAIWANSI yaizivikanwa nemakasitoma ekugadzira mhando yemhando yepamusoro zvigadzirwa. Uye nedhipatimendi rehunyanzvi reR&D, KAIWANSI inoenderera mberi yekuvandudza yemhando yepamusoro, zvigadzirwa zvitsva zvinosangana nezvinodiwa nemusika. Hwedu hwekambani hutsika hutsva, kubatana, kuita pamwe nekushanda nesimba. Uye nhengo yega yega pano inogona kuwedzera kugona kwavo pachavo kuvaka iyo kambani kambani.
Through mushandirapamwe nemakambani ekutengesa, isu tinopa OEM & ODM sevhisi kune akawanda epamusoro marangi mumakore apfuura. Muna Chikunguru, 2019, kuitira kuti uwedzere INDIA NEEURO bhizinesi chiyero uye uzive zvakawanda nezve musika, KAIWANSI yakagadzira dhipatimendi rekutengesa kunze kwenyika, panguva ino, KAIWANSI yakagadzira yake yega brand FITHEM ... Kubudirira kwedu hakungori chete kubva kumusoro kunetseka kwemhando yepamusoro, asi kubva kune vatengi kuvimba uye rutsigiro. Uye akahwina mukurumbira wakanaka uye mukurumbira mumusika wepasi rese uye zvakare akawana mukurumbira wakanaka mukuita pamwe chete Mazano pane chigadzirwa chigadzirwa. Isu tinokugamuchira nemoyo wese kuti utarise kunze kwefekitori uye nekutsvaga kubatana kwenguva refu.